Xbox Series X inouya ne AMD 12 TFLOP GPU uye AMD Zen 2-based CPU | Linux Vakapindwa muropa
Xbox Series X inouya ne AMD 12 TFLOP GPU uye AMD Zen 2-based CPU
Munguva pfupi yapfuura ruzivo rwakaburitswa nezve iyo Hardware iyo ichave iine nyowani yeMicrosoft koni, inova iyo "Xbox Series X". Kufanana nemukwikwidzi wayo, Sony PlayStation 5, iyi nyowani yemutambo koni ichapihwa simba neyakajairwa chip inoenderana neX86 Zen 2 dhizaini yakaunzwa panguva yekuunzwa kweiyo EPYC Roma machipisi uye 8K-yakagadzirira AMD giraidhi redunhu rakabatanidzwa neGDDR6 uye iyo nhanho yekuita inogona kuenzana neiyo yeRadeon VII, yepamusoro-kumagumo GPU yakatangwa gore rapfuura.
Microsoft ichangobva kusimbisa zvirevo zvepamutemo yeayo inotevera mutambo koni, iyo yakarongerwa kuvhura gore rino. Iwo maratidziro akapihwa anosimbisa simba rekoni, ine yakasanganiswa 12 TFLOP GPU iyo pabepa inoratidza kuve ine simba rakapetwa kasere kupfuura iyo GPU yakavakirwa muiyo Xbox Imwe yekutanga uye yakapetwa kaviri zvine simba seiyo Xbox One X, iyo yatove kukwanisa kuparira zviitiko chaizvo zve4K.
Padivi reCUU, tichawana AMD Zen 2 CPU ichipa kusvika kanokwana simba rekugadzirisa reXbox Rimwe.
Iyi nhamba ye12 TFLOPs inonakidza kwazvo kune koni uye kuti inzwisise zvazvinoreva, zvinofanirwa kuyeukwa kuti kadhi rine simba kwazvo reGMD, iyo Radeon VII yakazivisa gore rapfuura, iro rakanyanya simba rekomputa ye13.4 TFLOPs.
Microsoft yakasimbisawo rutsigiro rwehardware pane yako nyowani koni ye "Ray Kutsvaga" iyo inowanzo simbisa kubatanidzwa kweiyo AMD RDNA Gen 1 kana 2 GPU, iyo SSD-yakavakirwa Sisitimu sisitimu iyo inogona kuita seyechokwadi RAM uye ine simba kuratidza kusvika ku120fps yekutarisisa kuona.
Uhwu ndihwo humbowo hwekupedzisira hwekuti AMD inouya yeRDNA2 yekuvakisa inokwanisa kutarisisa kwehardware. Kushaikwa kweHW-RT kwainyatso kuisa AMD GPUs pakaipa pamusoro peNVIDIA Turing GPUs.
Chii zvakare chinonakidza ndechekuti iyo nyowani nyowani inotsigira HDMI 2.1, chimwe chinhu chisina kadhi yemifananidzo inotsigira.
Xbox Series X zvakare ichapa iyo "Kurumidza Kutangazve" nzira yevatambi vakawanda iyo inokutendera iwe kusevha mamiriro emutambo kana mitambo yakawanda uye kuitazve iwo ipapo ipapo chaipo pawanga uri, pasina kumirira mitoro mirefu.
Iyo Xbox Imwe yatove nebasa rakafanana, asi inogona chete kuchengeta inokurumidza kutangazve nyika yemutambo wekupedzisira watambwa.
Nezve yayo nyowani koni, Microsoft inochengetedza kuti:
"Iyo Xbox Series X inopa yechokwadi genational kusvetuka mukugadzirisa uye giraidhi simba nekuda kwetekinoroji yepamberi inogonesa yakakwira zororo mitengo, yakakura uye yakaomesesa mitambo yepasirese, uye chiitiko chinonyudza chisati chamboitika mumitambo yekoni."
Uyewo, kambani yakasimbisazve, kune avo vasina chokwadi nazvo, kuti:
Iripo Xbox Mimwe mitambo, inosanganisira kumashure-inoenderana Xbox 360 mitambo uye yekutanga Xbox mitambo inogona kutotambwa pa Xbox Series X ine 'yakadzikama furemu mitengo, inokurumidza nguva yekuremerwa, uye kugadzirisa kugadzirisa uye kutendeka kutarisana, zvese pasina chero basa rekuvandudza rinodiwa.'
Kunyanya kunakidza, Microsoft inoita kunge yakazivisa kuzvipira kutsva kuona kugarisana munzvimbo yese yeXbox. kuburikidza chirongwa chakadaidzwa Smart kununurwa iyo inokutendera iwe kuti utenge mutambo wevhidhiyo kamwe uye uuvhure zvakaringana pane chero inoenderana Xbox Console.
Finalmente Microsoft inotarisirwa kupa rumwe ruzivo nezve X akateedzana consoles paElectronic Entertainment Expo yegore rino muna Chikumi, iyo inosanganisira mutengo wemhando dzakasiyana.
Ndichiri kudivi remakwikwi (Sony) nguva pfupi yadarika yakasimbisa kuti haizotora chikamu muE3 uye haizounzwe. Nezve izvi, Sony iri kubvumidza kuwedzera kuchinjika kuona kuti riini uye sei richazivisa mutengo, uyezve zvimwewo nezve iyo PS5 inopihwa, kunyangwe vazhinji vatove kunetsekana kuti mutengo weconsole nyowani unogona kupfuura mutengo we $ 500.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Xbox Series X inouya ne AMD 12 TFLOP GPU uye AMD Zen 2-based CPU
Kuyera mashandiro eTFLOPs kuri kutsausa, kune zvakawanda zvimwe zvinhu zvinopinda mukutamba. Zvakare iri koni rinotaridzika zvakanaka kwazvo uye ndinofanira kubvuma kuti ndiyo yekutanga mumakore yandinoona yakadzikama koni. Chinhu chakashata semazuva ese munyaradzi chichava chikamu chepamhepo, icho chiri kubhadharwa chestnut.
Pindura kune zvisina maturo
SparkyLinux 2020.02 inosvika neKernel 5.4.13 uye package package